SUPER WEBCAM RECORDER 4.3 FREE DOWNLOAD - PROGRAMME REVIEW - 2019
Fantatry ny rehetra fa tsy misy rindrambaiko manokana ny webcam dia fitaovana tsy mavitrika. Saingy miaraka amin'ny fanampiana ireo fandaharana izay afaka mampiasa izany araka ny tokony ho izy, afaka manoratra horonantsary amin'ny alalan'ny webcam ianao. Iray amin'ireo izany Super Webcam Recorder, ary noho ny asany, dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra hakana sary avy amin'ny webcam.
Manoro hevitra izahay ny: Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny fandraisana horonantsary avy amin'ny webcam
Tsy toy ny SMRecorder ao amin'ny Super Webcam Recorder, ny fahafahana manoratra horonantsary dia tonga dia avy eo, ary tsy mila miditra amin'ny sakafo fanampiny, satria ampy ny manindry ny bokotra "Record". Marina fa tsy toy ny fandaharana iray ihany, dia tsy misy azo atao ny maka sary amin'ny sary, nefa azonao atao koa ny mampifandray ny camera IP.
Ny bokotra "Disconnect" dia hamafa ilay fakantsary ary tsy mamoaka ny horonam-peo an-tsary ary amin'ny ankapobeny misy hetsika miaraka aminy.
Raha mandritra ny horonan-tsarimihetsika dia azonao atao ny miato ny dingana (1), mameno azy (2) ary manaova sary avy amin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny hafa amin'ny fakantsary (3). Azonao atao ny mifidy ny endriky ny sary mba ho voavonjy amin'ny fipihana ny telozoro eo akaikin'ilay bokotra "Snapshot" (3).
Ny mpitantana ny solosaina natsangana ao anatin'ilay fandaharana dia azo lazaina ho feno tanteraka, na izany aza, miaraka amin'ny fanampian'izany dia azonao haingana ny miditra amin'ny horonantsary voarakitra sy ireo sary voatahiry. Ankoatra izany, azonao atao ny manokatra ny ordinatera izay itahirizany azy ireo amin'ny fipihana eo amin'ny sehatry ny folder.
Manendry ny fanalahidanana
Ny programa dia afaka mametraka mofomamy amin'ny hetsika maoderina, izay tsy azo atao amin'ny WebcamMax.
Amin'ny alalan'io asa io no ahafahanao mametraka ny fotoana fanombohan'ny firaketana sy ny fiafarany.
Tsy misy olona tia marika famantarana ny rano, satria manelingelina ny fijerena horonantsary izy ireo, kanefa ahafahantsika manaporofo fa tena misy anao ity lahatsary ity. Ny programa dia manana fahafahana hampiditra ny mari-pamantarana mirakitra ny horonantsary (na dia aorian'ny 20 segondra aza ny dikan-tenany manokana dia hita ao amin'ny version malalaka). Afaka misafidy sary ianao (1), manoratra lahatsoratra (2), ary mametraka zavatra toy ny sisintany (3). Ankoatra izany, azonao atao ny mifidy ny toerana misy ny mari-drano (4).
Ampio ny mari-pamantarana misy anao
Tsy misy fiantraikany
Super Webcam Recorder dia fitaovana tsotra sy mahaliana ho an'ny horonantsary amin'ny horonan-tsary. Natao fotsiny izany, satria tsy misy fiantraikany amin'ny fotoana mahamety azy, ary ny fahafinaretana amin'izany dia tsy hiasa amin'ny faniriana rehetra. Amin'ny ankapobeny, ireo mpandraharaha dia nitarika ho amin'ny fampiasana ny fandaharam-potoana bebe kokoa amin'ny fandaharan'asa, ary ny fiasan'ny drafitra sy ny fanampin'ny marika famantarana iray dia manamafy izany.
Afaho ny version of version of Super Webcam Recorder
Icecream screen recorder Webcam monitor oCam Screen Recorder SUPER
Super Webcam Recorder dia fampiharana marobe amin'ny fandraisana horonantsary avy amin'ny webcam. Manohana asa amin'ny AVI sy WMV format.